Ron'akoho sy angivy ary anamalaho - Recette de cuisine Malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 28 décembre 2016
Laoka anio: Ron’akoho sy angivy ary anamalaho (bouillon de poulet) ampiarahina amin’ny sakay be endasina.
Tongolo sy voatabia.
Fomba fikarakarana ron’akoho sy angivy ary anamalaho
Ron’akoho sy angivy ary anamalaho: tenehina halemy ny akoho sy sel. 5mn alohan ny androsoana azy dia arotsaka ny angivy sy anamalaho.
sakay be endasina: endasina 2mn ny sakay, asiana sel sy poivre. Arotsaka ny tomate sy oignon. Tsy atao masaka be. Aroso avy hatrany.
Esorina foana ny voan’ny sakay alohan’ny anendasana azy fa tsy mahasalama.
Ny vaha-olana ra toa ka tia sakay na epice be ianao anefa tsy mahazaka fa misy mony foana isaky ny avy mihinana dia ny fisotroana rano betsaka. Ra toa mbola tsy afak’izay dia tsara ra manantona dermatologue avy hatrany.
akoho nahandro gasy, akoho rony recette, bouillon de poulet au gingembre, laoka malagasy, ron'akoho gasy
Article précédent : Henabaolina sy tsaramaso lena sy lasary voatabia
Survolez la plage de Mahambo en drôneArticle suivant :